FAQs - Ningbo WEDAC Point pamusoro Sale Ratidza Co., Ltd
Ndine chete zvimwe mifananidzo vakaratidza, unogona kutipa kotesheni? Kana kwete, chii chimwe unofanira anoda?
Sorry taisagona Quote inobva chete mufananidzo, kanenge tinofanira nokuyerwa nerimwe chivako, ukobvu uye unhu zvinodiwa kuti zvinhu, uwandu zvaida, rondedzero nekuda kwayo kushandiswa, uye mashoko ari chigadzirwa izvo zvinofanira kuratidzwa.
Ndine gadzira, kwakakwana?
Ok, asi ndapota tara anoenderana mashoko sezvo detailed sezvinobvira: nokuyerwa and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
Ndine pfungwa Design
Ok, asi ndapota cherechedza anoenderana mashoko sezvo detailed sezvinobvira: nokuyerwa, ukobvu uye unhu zvinodiwa kuti zvinhu, uwandu zvaida, rondedzero nekuda kwayo kushandiswa, uye mashoko ari chigadzirwa izvo zvinofanira kuratidzwa
Kuti zvichava zvakanaka, uye kana zvinotevera mashoko achava kuwanikwa, zvichava yakakwana:
The chigadzirwa izvo zvinofanira kuratidzwa
Artwork kana Chikwata, hwakajeka muwedzero / bepa, decal kana kudhinda rikashandiswa.
Pantone ruvara nhamba kuti silkscreen yokudhinda.
Ndichatiyi kupa kana ndinoda chiratidzwa kuti customized?
Ndapota zvinopa zvinotevera kana vanoda customized kuratidza chikwata:
1. Kuwanda zvichida yako kutanga hurongwa.
2. A kwakakwana akagadzirwa michina vanodhirowa zvichava zvakanakisisa zvakadzokororwa yedu, kugadzirwa kana kunzwisisa kwako zvinodiwa.
3. Kana usina zvekushandisa kudhirowa, imwe pfungwa (namaapuro) yokukweva kushanda (kana kunyange gadzira) anonetsa hukuru uye tsananguro achava shandika.
4. Mashoko zvinhu zvenyu kuti uratidzwe ari kuratidzwa Unit: Zvakaita, saizi, uremu, zvinhu, mufananidzo nezvimwewo, nekuti tinofanira kugadzira / kuedza kuratidza kwakavakirwa nezvokuzadziswa zvigadzirwa, yakazara akagadzirwa mimwe zvigadzirwa zvako zvaida kuti dziedze kuratidzwa chikwata tisati anokuisai kokupedzisira mharidzo.
5. Kana wako akaratidza kudiwa kuti afuke echiShinto, tapota kutipa mashoko ari pasherefu: Zvakaita, saizi, buri nzvimbo yechigarire, zvinhu, mufananidzo etc.
Chii ruzivo chinodiwa kuti chitaurwa, uye chii mashoko anodiwa zvinhu zvinofanira kuwanikwa kuti chitaurwa?
1. Tinofanira nokuyerwa nerimwe sechivako nechimwe chikamu,
2. ukobvu uye unhu zvinodiwa kuti zvinhu,
4. kugadzwa zvakatipoteredza uye mashoko
5. uwandu zvaida,
6. rondedzero nokuda kwayo kushandiswa, uye mashoko ari chigadzirwa izvo zvinofanira kuratidzwa.
7. Apex mashoko
8. Artwork kana Chikwata, hwakajeka muwedzero / bepa, decal kana kudhinda rikashandiswa.
9. Customer inokosha mashoko, kuonana
10. Price izwi
Sei nokukurumidza ndinogona kuwana mutengo (zvakadzokororwa)?
1. Kana detailed vanodhirowa anopiwa, kana hwakadzama mashoko zvose dziripo mashoko , kazhinji tinogona kupa mutengo mukati 2 mazuva, achapa mashoko tichikufunga maererano chaiko mamiriro ezvinhu basa.
zvinhu zvakawanda kana kuomesa zvinhu kutora nguva nekaupenyu refu.
Basic mutengo (pasina chiputiriso mashoko, kana Aimbova basa mutengo) chingava Provider nokukurumidza.
Complete mashoko (pamwe chiputiriso details, uremu, kutungamirira nguva yokuti mharidzo uye kugadzirwa etc.) achatora nguva nekaupenyu refu.
2. Information hakusi kwakakwana, mashoko anogona kuva pasina vanodhirowa, akatorwa mukati 3 days.
3. Need kuti zvakagadzirwa kutanga maipa mashoko, kazhinji zvinoda 1 vhiki kupa chitaurwa . Achapa mashoko tichikufunga maererano chaiko mamiriro ezvinhu basa.
Ndezvipi huru zvigadzirwa unogona kubereka?
Acrylic kuratidzwa, vanoratidza kumira, vanoratidza cabinet, zvizorwa vanoratidza, pasherefu Hwokutengesa, PC zvigadzirwa, PETG zvinogadzirwa etc.
Chiizve unogona kupa?
Plastic kuratidzwa, jekiseni zvigadzirwa, PVC extrusion, PVC pedhi, emapuranga vanoratidza, simbi vanoratidza etc.
Chii MOQ pamusoro WEDAC kugadzirwa?
Clear acrylic ratidza: 100pcs
Colorful Acrylic kuratidzwa: 500kgs
Sheet simbi vanoratidza kumira: 100pcs
Jekiseni epurasitiki kuratidzwa: 1000pcs
Chii zvatinosiita chiputiriso nzira mishonga yakasiyana?
1. General chiputiriso: 1pc / Pe hombodo / bhokisi yomukati, vanoverengeka hrs / katoni, kana hrs zvinoverengeka mubhokisi yomukati, ipapo N mabhokisi ari atorwa ..
2. Bulk chiputiriso: N hrs vari atorwa, vamwe infilling.
3. zinga atorwa, emapuranga crate, emapuranga zviitiko, furo mudziviriri, emapuranga pallets, mapurasitiki pallets etc. kuti kuita.
Chii muripo nzira ipi WEDAC kugamuchira?
WEDAC anogamuchira kubhadhara zvinotevera:
1. T / T 50% pachine sezvo okubhengi, uye nengaidzo pashure pokunge kopi B / L.
2. LC pa kuona
3. Other muripo nzira kukurukurwa uye dzinoongororwa sezvo paminiti uchida mamiriro ezvinhu.
Lead nguva yokuti mharidzo uye vakawanda kugadzirwa: Mharidzo mazuva 3-15, Misa kugadzirwa mazuva 15-50.
Expiry zuva chitaurwa: Mazuva Kazhinji mukati 30 chete.
Muenzaniso kugovera mutengo:
Value ≤10 madhora, vakasununguka, asi rekutakura mutariri anofanira kuva mutoro nenzira mutengi.
Kukosha> 10 madhora, Sample mutengo = chikwata mutengo x 3 + rekutakura mutariri anofanira kuva mutoro nenzira mutengi.
Kana chigadzirwa vanofanira kuvhura chakuvhuvhu, mharidzo mutengo vanofanira zvinosanganisira Foroma mutengo.
Mutengi anogona kushandisa T / T, paypal, kumavirira mubatanidzwa, moneygram, & chero nzira kuti muripo mharidzo mutengo.
mutengo Your kumusoro:
Hongu, pamwe mutengo wedu kupfuura nevamwe, nokuti hatimbodi kushandisa muduku zvinhu kana akatema makona uye kutendeuka kubva Sub-mureza zvinhu, hatina kumbobvira kuderedza unhu basa redu kuderedza mari chigadzirwa wedu, isu hatidi akapamba kumusika kuti mutengi yedu zvinhu zvakaipa, isu tariro nemhosva yedu uye nesu raigona akabatsirwa pamwe kubva yakawiriranwa bhizimisi.
Anogona zvenyu ambotaurwa mutengo kuva nekambani kana kuderedzwa?
Hongu, chokwadi, kana Qty., Spec. kana mashoko & mamiriro etc. achaparadzwa kugadziridzwa, kana tinzwisisane yakakwana chinosimbiswa.
Zvakadini yokuenzanisira haafari?
Isu achagadzirisa uye anopa muenzaniso itsva zvakare mahara.
Ndakaisa ndarayira. Now chii?
Tichakurukura dzifambirane iwe kurimwa kuitika mifananidzo kubva fekitari. Tichakurukura kutevera kugadzirwa rikurumidze uye kunaka chigadzirwa, nechokwadi zvose kusangana yenyu yepamusoro mureza, iva nechokwadi hapana chakaipa pamberi nhumbi kusiya fekitari yedu! ...... .and ungatarisira kugamuchira nhumbi akarayira mushure kugadzirwa nguva (yakanyorwa kuti) uye kutumira nguva (zvomugungwa kana).
Ucharamba dzifambirane isu kurimwa ezvinhu mifananidzo pashure murayiro wakaiswa?
Hongu chokwadi. Tichakurukura kutevera muitiro okuwana uye murambe iwe Updated.
Sei kudzora unhu chezvinhu?
Tine 3 QCs, ivo ongorora zvose uye zuva nezuva, ose chigadzirwa chichange iongororwe panguva yakaoma pachikuva, akadai, yakatsvuka zvinhu, Semi-chigadzirwa, dzapedza chigadzirwa, kurongedza nezvimwewo ..
Zvakadini kutumirwa neyokufambisa? Une yakavimbika kutumirwa mumiririri kana forwarder?
Hongu tine yakavimbika kutumirwa mumiririri & forwarder vachishanda nesu kwemakore akawanda, anogona kugara kununura enyu zvengarava nhumbi zvakachengeteka.
Kana tikaita FOB, Unobvuma akasarudzwa forwarder?
Hongu, asi forwarder vanofanira mvumo Isuwo tisati bhuku nzvimbo navo, kana forwarder ane benzi mutariri pamusoro pedu kana takawana zvinetso navo, tine kodzero kukumbira kuchinja kuti zvine munhu, kana vanoti akadaro mumwe kwamuri.
Zvakadini kutumirwa magwaro?
Kazhinji isu achapa inivhoyisi, kurongedza mazita uye rugwaro nhumbi sezvo mabhuku magwaro, kana mutengi vanoda zvimwe zvinyorwa, titendere aizviziva.
Mushure mokugamuchira nhumbi, kana kukuvara kana chakaremara zvinhu zvinowanikwa, tinofanira kuitei?
Tapota torai mifananidzo uye kutumira pakarepo kwatiri, isu ichatsiva payo inotevera zvacho.
Kana ndinoisa wodzokorora murayiro, mutengo inogona zvishoma kana woramba zvakafanana wokutanga murayiro?
Tichaongorora mutengo kwakavakirwa Gengi kuti mari uye zvinhu / basa mutengo pamusoro kugamuchira wodzokorora murayiro, uye kuti kuchinja maererano.
Uri fekitari / mugadziri kana bedzi kutengesa kambani?
Tiri mugadziri asi tinogonawo kuita zvokutengeserana kana zvakakodzera.
vashandi vari zvachose mune boka rako Vangani?
Pane uri 25 vashandi fekitari.
Chii rako kugadzirwa chinzvimbo?
About USD500000 nokuti akaratidza kugadzirwa pari, asi tinogona kuwedzera edu kugadzirwa vanokwanisa nokukurumidza.
Chii wako pari okutengesa vhoriyamu?
USD3 Mamiriyoni pagore.
Sei sarudza acrylic kuratidzwa?
1. Munguva World Wall Ⅱ 1939-1945, sezvo chaiwo plexiglass, acrylic waishandiswa chokutanga nevakawanda sezvo windshield kurwa ndege uye matangi, upenyu hwayo basa aiva nemakore anopfuura 10 pasi zvikuru ezvinhu.
2. Acrylic ane mukuru mwero pachena, uye mwero chiedza hutachiwana zviri 92-93% --- kupfuura girazi! Naizvozvo ane mukurumbira "epurasitiki sekristaro".
3. chiedza Its kunotarira nyoro, vakasununguka, uye akangwara (kufanana nedhaimani)!
4. Zvine wakanaka okunze nemishonga, epically panze, zvinzvimbo zvepamusoro pamusoro ari mapurasitiki. Good waivako yakakwirira tembiricha, kusarurama tembiricha kumativi 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Good ekunze nemishonga, asidhi uye alkali nemishonga, hapana chinonakidza kuti yellowing uye hydrolysis pashure pemakore dzokuteerera pasi mushana uye mvura.
5. Long waivako upenyu: zvichienzaniswa nevamwe zvinhu (akadai PS, AS, PP etc.), yakareba makore matatu waivako upenyu!
6. Excellent Anti-kuchembera kuita mudenga zvakabudiswa kuedza akaedzwa kuti: pashure 4 makore rwokuzvarwa kukwegura, , uremu acrylic chigadzirwa wacho kukwegura, , kusimba ndichinanavira, uye chiedza transmittance akaderedza zvishoma kukwegura, , ruvara Anoshandura zvishoma yellowish kukwegura, , crazing nemishonga kuderedza pachena, Zvisinei, Anti zvazvinoita waivako yakawedzera panzvimbo, uye dzimwe physic waivako anenge asina kuchinja!
7. ane mukuru mwero pamusoro zvakaoma uye Gloss,
8. Zvinonzi zvakaisvonaka & hunoshamisa azoshandiswa waivako, anogona inoumbwa nokupisa, uyewo zvinogona kupatsanurwa kuburikidza nomuviri machine.
9. Acrylic chinogona kuitwa kuva siyana maumbirwo uye zvigadzirwa zvinodiwa. Chinhu chinokosha chinowanikwa ndiko kuramba yakakwirira mwero pachena dzakakwirira mwero ukobvu.
10. Lightweight, cheapness, nyore kuumba.
11. acrylic acho ane risingaenzaniswi anokudzwa kubwinya uyewo inotevera zvazvakanakira: kuoma zvakanaka, kwete nyore wakaremara; repairable; ane nyoro magadzirirwo, pasina vachitova inotonhora munguva yechando. Chine akawanda, misangano yakasiyana kudiwa. Products yaakaita acrylic, havasi nemasango chete, asiwo kutsungirirwa.
12. Environment ushamwari:
1) ayo nemwaranzi Ndozvakaitawo kwemunhu marangwanda.
2) Waste zvinhu inogona zvishandiswezve nokuda shandisazve, marara ndiyo nyore uye nyore.
3) High Recyclable zvazvingava, Simbisa kwezvakatipoteredza ruzivo iri kuramba
4) Hapana monomer ngozi kana kunhuhwidza vachasunungurwa.
5) Food kuchengeteka, hapana zvakaipa kwevanhu muviri.
13. Energy kuchengetedza: Good mwero chiedza hutachiwana, kusvika 92-93%, zvishoma chiedza umbirimi
zvaida, nokuderedza magetsi, simba okuponesa, rokuponesa simba uye mutengo.
14. Strong Impact nemishonga, gumi nguva pane zvavo magirazi, yakakodzera kuisa mune yakachengeteka mapazi kuti zvidikanwi.
15. Good Insulation waivako, zvakakodzera kuti dzakasiyana-siyana magetsi.
16. Light uremu, hafu uremu zvavo rinoonekera.
17. Colorful, anokudzwa kubwinya, risingaenzaniswi kune vamwe zvinhu.
18. plasticity Strong, nyore Kuumbwa.
19. Nyore kuramba, nyore kuchenesa, vasanaiwa nemvura anogona zvoga yakachena.
20. Soft unaku, kunzwa kwete chando sezvo girazi kana zvedongo muchando.
21. Chiedza ruvara, kundosangana nomumwe pakutsvaka kuti huri upenyu.
22. Excellent waivako kuti kudhinda kana unhani, kana kushandiswa zvakakodzera kudhinda kana spraying unhani zvigadzirwa, zvinogona kupa acrylic zvigadzirwa akanaka pamusoro yokushongedzwa mugumisiro & nemaonero.
23. Kutsungirira Good, zvakafanana aruminiyamu, zvakanaka pakusimba pamwe mishonga, unogona kutsungirira Kuparara zhinji makemikoro.
24. dzakarukwa zvakanaka kudzivirira kuti munyika zviedza vatiitire upenyu basa vezviedza.
25. kutsungirirwa pamoto, isingaparadzaniswi vaingoerekana combustion uye nokuzvidzora anodzima.
26. Pane uri acrylic zvinhu ine yakasiyana & vakawanda chaitwa, ruvara siyana uye ziso zvinokonzerwa, aigona runodikanwa siyana vatengi.
27. Aiva chinooneka impacting pashure zvakakodzera kubudiswa, kushongedzwa uye rokudhinda.
Ndezvipi musiyano pakati acrylic kuratidzwa nezvimwewo zvinhu? Acrylic Vs Glass
In indasitiri, acrylic acho ane vakwanise kushanda pane girazi zvinhu, sezvo ane mikana yakawanda pamusoro girazi zvinhu.
1. chinhu kubudiswa, acrylic anogona kuiswa muzvikamu zvikuru mhando uye zvitarisiko pane girazi.
2. Vari vaviri kusimba, zvisinei acrylic zvinhu zvakawanda anonzwisisa kupfuura girazi. Kana girazi musisiri, izvozvo vhuna muruoko unopinza zvidimbu izvo nyore kukuvadzwa vanhu; apo acrylic rinopatsanurwa kuita hombe, kungopotsera zvidimbu, uye hazvizorwadzisi vanhu. Nokuenzanisa maviri zvokunyama, mumwe vanosarudza isingakuvadzi acrylic zvinhu.
3. Vose yakakwirira yakachengeteka zvokudya giredhi, kemikari kutsiga kukwegura, , utsungirire mukuru Kuparara mishonga, kwete soluble nemvura.
4. Chinooneka chiedza permeation kukwegura, , UV kukwegura, , uremu ndiyo 1/2 tsika rinoonekera.
5. Light permeation kusvika 92-93% kukwegura, , vanhuwo zvavo läpinäkyvä mapurasitiki (PS, AS, PVC etc.) ane chiedza permeation chete zvishoma kupfuura 80%.
6. Anti-rova waivako ndiyo 12 ~ 18 nguva zvavo nesilicon girazi.
7. Mechanical zvakanyanya uye mukana wokushandiswa ndiyo 10 nguva pane zvavo nesilicon girazi kukwegura, , noukukutu zvakafanana aruminiyamu kukwegura, , kunoshamisa ekunze kuzvidzivirira uye kuchembera nemishonga.
8. Maonero aizvigona yakanaka kukwegura, , muridzi sekiristaro akafanana Gloss pashure makorari kukwegura, , ainziwo "Mambokadzi Plastic Crystal".
Differerence pakati acrylic vanoratidza uye PS jekiseni kuratidza:
1. acrylic vanoratidza anotarira zvakawanda yakajeka uye akanaka kupfuura PS jekiseni akaratidza pani, uye ine mukuru mwero pamusoro Gloss, muridzi sekiristaro akafanana Gloss pashure makorari ,; Excellent waivako wokudhinda mabhuku kana unhani, kana kushandiswa zvakakodzera kudhinda kana spraying unhani workcraft, zvinogona kupa acrylic zvigadzirwa akanaka pamusoro yokushongedzwa nesimba & nemaonero. Naizvozvo akaita risingaenzaniswi huru yakanaka maonero.
2. Acrylic ane yakareba waivako upenyu pane PS, makore anenge matatu refu muupenyu basa.
3. acrylic Kuratidzwa pani haadi kuzarura chakuvhuvhu, saka hapana Foroma mutengo kuchaitika, uye ukuru hwaro uye mamiriro anogona customized nyore chero nguva.
4. Kunyange zvakadaro acrylic kuratidzwa kuri kwakakwirira zvikuru chikwata mutengo pane PS jekiseni kuratidza.
5. PS jekiseni kuratidza pani iri isingadhuri kwazvo Unit mutengo, Zvisinei tinofanira kuvhura Foroma pakutanga uye rine Foroma mari kubhadhara anowedzera.
6. Acrylic ane simba zvikuru endurability pasi panze ezvinhu, ane hunoshamisa ekunze nemishonga.
7. Acrylic ane Anti-UV zvikuru chaitwa, Anti kuchembera unongotaura.
8. Vose kusimba, cracking walnut pasi tembiricha yakaderera.
9. PS ane nani jekiseni waivako, zvakakodzera kuti kugadzirwa pamwe yakawanda. Small todzokera zvazvingava nokuda chigadzirwa, saizi akatsiga.
10. PS mushure dzokupisa pasi pamushana, nyore kutendeukira yellowish uye blurring.
2. Acrylic ane yakareba waivako upenyu pane PP, dzinenge nhatu makore refu muupenyu basa
4. Kunyange zvakadaro acrylic kuratidzwa kuri kwakakwirira zvikuru chikwata mutengo pane PP jekiseni kuratidza.
5. PP jekiseni kuratidza pani iri isingadhuri kwazvo Unit mutengo, Zvisinei tinofanira kuvhura Foroma pakutanga uye rine Foroma mari kubhadhara anowedzera.
6. PP dzamutswa, kwete simba uye nesimba acrylic.
7. PP kwakaita pachena zvinogona chisingaenderani arylic.
8. Acrylic ane simba zvikuru endurability pasi panze ezvinhu, ane hunoshamisa ekunze nemishonga.
9. Acrylic ane Anti-UV zvikuru chaitwa, Anti kuchembera unongotaura.
The acrylic vanoratidza anotarira zvakawanda yakajeka uye akanaka kupfuura PETG pani, uye ine mukuru mwero pamusoro Gloss, muridzi sekiristaro akafanana Gloss pashure makorari ,; Excellent waivako wokudhinda mabhuku kana unhani, kana kushandiswa zvakakodzera kudhinda kana spraying unhani workcraft, zvinogona kupa acrylic zvigadzirwa akanaka pamusoro yokushongedzwa maturo. Naizvozvo une risingaenzaniswi & akanaka zvikuru maonero.
PETG ' S Anti-rova waivako ndiyo 1-3 nguva kwakasimbisa acrylic , uye 3 ~ 10 nguva zvavo acrylic. PETG: Hard, Anti kwechirwere, uye kutsungirira, kunyange pasi hwaiitwa tembiricha asingasviki -40 ℃ . PETG zvigadzirwa vane endurability yakakwana fabricatio N, zvifambiso uye kushandiswa. Zvinogona kudzivisa nokuputsa zvinobudirira.
PETG ane zvakawanda kwazvo dzichiumbwa waivako, hapana chena pashure vachikotama pasi kwomuzvarirwo tembiricha, hapana chena pashure inotonhora vachipfugama, hapana mitswi, nyore kuti kudhinda uye kushongedzwa.
PETG nyore kubudisa zvinhu pamwe omesa marongerwo uye hwakareba kutambanuka.
PETG ndiye moto nemishonga, hazvina kuva combustible, uye asingadi kubatsira nokutsva, maererano mureza kuvaka zvinhu, hapana pfuma ngozi yakabereka pashure nokutsva, zvakawanda vakachengeteka pane acrylic.
Anti-UV, zvinogona zvinowanzoshandiswa signages panze kana indoor, Point pamusoro Sale, Ratidza Rack, Outdoor midziyo, okutengesa dumba, rokudzivirira Panel kuti equipments, kutamba chiteshi Panel, nekutengesa muchina Panel etc.
Hazvina thermoplastic ezvinhu ushamwari chigadzirwa, kwete rine zvimwe zvinhu zvine maatomu akafanana kunze C, H, O, zviri epurasitiki rudzi rwuri biodegradable. Products akaita zvinhu izvi mushure kusiyiwa, ivo vachadzoserwa kuti mvura uye carbon dioxide, It rinogonawo zvishandiswezve pasina kusvibisa zvakatipoteredza.
PETG ndiye anodhura pane acrylic, asi isingadhuri kupfuura PC uye yakasimba kupfuura acrylic.
PETG anoenderana zvokudya kuonana mureza FDA, zvaigona kushandiswa zvokudya, mishonga nezvimwewo, rinogona kushandiswa sezvo chiputiriso zvokunyama kana midziyo-siyana zvokudya ...... uye runotsungirira lipids uye yakawanda mishonga, nemishonga kukurwa kwevhu pamusoro acid, alkaline uye mafuta nezvimwewo, zvinoita anoonekwa somunhu acho yakachengeteka zvokudya uye vanhu.
PETG rave richishandiswa nevakawanda muhombodo kunhuwirira aro lids, zvizorwa hombodo aro lids, akaita sepombi lipstics, mabhokisi zvizorwa, deodorizer midziyo, hombodo mwana upfu, eyeliner nguwani, etc. uye PETG jekiseni zvigadzirwa: filters, eustachian chubhu, connector kuti nyere , pombi, clippers, uye dialysis equipments etc. Household zvinogadzirwa zvakadai makapu, Salad mbiya, saltcellar, mhiripiri shaker, bhengi kadhi, mvura midziyo etc., izvo vanoda yakakwirira yakachengeteka zvinodiwa kuti vanhu.
1. PVC ari manyoro, zvakachipa uye kazhinji wakawondereiko kudai mazuva ose.
2. Transparent PVC ukobvu kazhinji haasi kupfuura 3mm.
3. PVC kwakaita pachena zvinogona chisingaenderani arylic.
4. PVC haisi chikafu yakachengeteka, uye kwete zvakatipoteredza ushamwari.
5. PVC Kazhinji rinoshandiswa pamwe acrylic hurongwa sechikamu kuratidzira.
Totally differerent kumativi ose zvinoumba: maonerwo, ari pachena, kuti unaku etc.
Siyana mune zvakawanda, asi kazhinji acrylic ndiye simba rokuponesa, mamiriro unodzivirira Zvisinei danda vanofanira zvakavapoteredza.
Acrylic Vs Sheet simbi
Kusiyana kunyanya kuoneka sezvakaita pachena, maonero, mukurumari uye kusimba.
Acrylic Vs Ceramic
Naivo zvetsika zvedongo zvinhu, acrylic ane risingaenzaniswi mukuru Gloss, uye ine zvinotevera zvazvakanakira: mukana wokushandiswa Good, kwete nyore tyoka, nyore kuti igadziriswe, chete kushandisa nyoro furo nechimedu mushonga wemazino, aigona kuchenesa utsanana kuti matsva.
Soft unaku, kwete kunzwa kuti inotonhora muchando.
Chinopenya ruvara, aigona kusangana akasiyana nomumwe pakutsvaka kuti unhu upenyu.
Environment noushamwari, zviri nemwaranzi akafanana kwemunhu marangwanda.
Ndezvipi musiyano pakati glued kuratidzwa uye jekiseni kuratidza?
Glued kuratidza haadi kuvhura chakuvhuvhu, uye ayo marongerwo uye configuration raigona customized nguva dzose pasina mamwe muripo, saizvozvo achaponesa guru mari chakuvhuvhu mutengo naivo jekiseni vaya, uye glued vanoratidza ave zvayo dzaishandiswa zvakanaka maonero naivo jekiseni vaya. Kana vanhu havadi kushandisa Foroma cost, kana chigadzirwa haisi akakodzera kuti jekiseni, kana vanhu havadi kubereka vakawanda kwazvo nokuda womuenzaniso, kana vanhu vachida kuedza pamusika pamwe itsva design, glued acrylic kuratidza chichava chisarudzo chakanaka. Jekiseni zvigadzirwa vanoda vatengi kushandisa Foroma mutengo kana firimu hurongwa huru uwandu, uye kamwe chacho yokutanga mumwe womuenzaniso ari atanga, hazvigoni dzakachinjwa kana kushandurwa zvakare. Kana uchida kuva mumwe muenzaniso ane namaapuro "nani", iwe uchava kuvhura idzva muforoma zvakare kana kuita glued acrylic azoshandiswa.
Chiri glued kuratidza simba zvakakwana?
Hongu, kana iwe musarasa navo kana kumira pamusoro payo, kana kushandisa acrylic kuratidzwa rokubata simbi zvinogumbura.
Chii Ndicho zvinhu uye zvakanakira glued acrylic kuratidza?
Glued kuratidza haadi kuvhura chakuvhuvhu, uye ayo marongerwo uye configuration raigona customized nguva dzose pasina mamwe muripo, saizvozvo achaponesa guru mari chakuvhuvhu mutengo naivo jekiseni vaya, uye glued vanoratidza ave zvayo dzaishandiswa zvakanaka maonero naivo jekiseni vaya. Kana vanhu havadi kushandisa Foroma cost, kana chigadzirwa haisi akakodzera kuti jekiseni, kana vanhu havadi kubereka vakawanda kwazvo nokuda womuenzaniso, kana vanhu vachida kuedza pamusika pamwe itsva design, glued acrylic kuratidza chichava chisarudzo chakanaka.
Zvakadini rako budiriro chirongwa mune ramangwana pedyo?
Tinozo kudziridza yakawanda dzinotevedzana acrylic kuratidzwa (vazhinji vavo vane Hwokutengesa maitiro, uye navamwe zvinhu zvakadai MDF, PC, PETG, jira simbi etc.) zvakasiyana mitsetse, zvakadai zvizoro, Pharmaceuticals & zveutano zvigadzirwa, e-fodya, kunwa & zvinodhaka, pakuzadza daily & zvemumba nezvimwewo, nokuti kushandiswa merchandising, mharidzo kuratidza, okutengesa kusimudzirwa etc.
Tichafara kupinda Globalshop 2015 muna Las Vegas muna US panguva Mar. 24-26 fung 2015.
Zvakadini workcraft muitiro:
Design kana kudhirowa Auditing → Materials Rezvokutenga → Laser achicheka → hwokugaya hwakabvira → makorari → kupisa vachikotama → Silk chinovhara yokudhinda → gluing → vanoungana → rokuongorora → kurongedza → ainge atumirwa
Chii rako chairo Equipment?
Laser nokuveza Machine 5
High nokukurumidza router 2
Diamond makorari Machine 1
Chokurukisa azvikuya Machine 1
Pamusoro planer 1
Flame makorari Machine 2
Table akaona 2
Table achiita zvokutemera Machine 1
Nemazvo Kuomesa hovhoni 1
Heat vakafugama Machine 4
Ultrasonic nomoto Machine 1
Uye zvakawanda ......
Ko ukapa kuratidzirana chipi dzomunyika pezvitsiga?
Hongu, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, miti yakasvibira etc.
Une QC dhipatimendi?
Hongu, tine QC dhipatimendi, 3 QC.
Ita iwe R & D dhipatimendi?
Hongu, tine R & D dhipatimendi, 3 vagadziri.
Unoziva zvinopa ODM zvigadzirwa?
Hongu, tine zvakawanda ODM zvigadzirwa. Ose mwedzi isu pachava kanenge 2-3 zvigadzirwa itsva itsva kugadzira.
Ndapota kuswedera rokutengesa edu chikwata uye vabvunze zvakananga email, skype , or telephones!
Ivo vachakupai chiriporipocho uye nyanzvi mhinduro!